Xubnaha Guddiga CERB - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Kaabayaasha Dhismaha|Guddiga Soo nooleynta Dhaqaalaha Bulshada (CERB)|Xubnaha Guddiga CERB
Xubnaha Guddiga CERB iyo Macluumaadka Shirka Guddiga
Xubnaha CERB waxaa loo magacaabay inay matalaan danaha kala duwan iyo dhammaan gobollada juqraafiyeed ee gobolka ugu yaraan muddo saddex sano ah. Guddigu wuxuu ku shiraa lix jeer sanadkii Xarunta Shirka Shirarka ee Lacey ee ku taal Lacey, Washington.
Halkan guji si aad u aragto Taariikh Nololeedka Xubnaha Golaha
Halkan guji si aad u hesho Khariidadda Xubnaha Guddiga
Kusoo dhawow Xubin Cusub!
CERB waxay soo dhaweyneysaa xubin cusub oo Golaha ka tirsan Mike Mason buuxinta Jagada # 12, Wakiilka Qabiillada Hindiya ee Federaalku Aqoonsado. Halkan ka akhriso taariikh nololeedkiisa.
Boosaska Xubinta Golaha CERB
Jagooyinka xubnahan soo socda ee Golaha waxay furan yihiin laga bilaabo Sebtember 3, 2020. Muddadoodu waxay ku egtahay Sebtember 2, 2023.
Meesha # 5: Ganacsiga Yaryar, Galbeedka Puget Sound - Foom Codsi (Erey)
Codsadayaasha Jagada 5 waa inay ka shaqeeyaan shirkad yar oo ku taal Galbeedka Puget Sound.
Meesha # 9: Ganacsi Yaryar, Bariga Wabiga Kolombiya - Foom Codsi (Erey)
Codsadayaasha Jagada 9 waa inay ka shaqeeyaan shirkad yar oo ku taal bariga wabiga Columbia.
CERB waa la kulmay lix jeer sanadkii, Khamiista saddexaad ee bil kasta. Cudurka faafa ee COVID-19 awgood, kulamadan waxaa hadda lagu qabtaa khadka tooska ah ee loo yaqaan 'Zoom'. Shirarku waxay sida caadiga ah bilaabaan 9-ka subaxnimo waxayna soconayaan illaa 3 galabnimo. Shuruudaha waa 3 sano, xubnuhuna waxay shaqeyn karaan illaa laba xilli, illaa ay ka buuxinayaan erey aan dhammaanin.
Si aad u dalbato, fadlan soo degso foomka dalabka, buuxi, saxeex, kuna soo celi cinwaanka ku qoran bogga ugu dambeeya ee foomka. Codsiyada waxaa loo diri karaa qaab elektiroonig ahaan ah iyadoo la iskaankayo ​​laguna soo dirayo cinwaanka la muujiyay.
Barnaamijka Iskaashatada Gaarka ah
Barnaamijka Hormarinta Mustaqbalka
Barnaamijka Xadka Baadiyaha Miyiga
Shirka Gudiga ee xiga: 01/21/2021
CERB waxay kulmaan lix jeer sanadkii, khamiista saddexaad ee bil kasta. Cudurka faafa ee COVID-19 awgood, shirarkan waxaa lagu qabtaa khadka tooska ah ee loo yaqaan 'Zoom'. Xiriirinta shirarka shaqsiyadeed waxaa lagu daabacay boggayaga usbuuc ka hor kulan kasta.
Jadwalka Shirka 2019-2021 iyo Taariikhaha Codsiga (PDF)
Archives-ka Agenda Packet
Xirmooyinka Agenda Shirka 2020
Xirmooyinka Agenda Shirka 2019
Xirmooyinka Agenda Shirka 2018
Xirmooyinka Agenda Shirka 2017
Xirmooyinka Agenda Shirka 2016
Halkan guji si aad uhesho Diiwaanka Wargeysyada CERB.
Halkan ka daawo Xaashida Xaqiiqda ee Mashaariicda CERB lagu abaal mariyey.
Agaasimaha Fulinta & Xiriiriyaha Qabiilka
Nagala soco Warbaahinta Bulshada!